हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट, पेशा गृहिणी – Jagaran Nepal
हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट, पेशा गृहिणी
उनको कुरा सुनेर मैले पनि मनमनै कल्पना यस्तो गरें – यदि घरमै बसेर बच्चा हुर्काउने काम गरेबापत हामीलाई पेशा, मातृत्व भन्ने टाइटल र सरकारी तलबको व्यवस्था हुँदो हो त! त्यो नभए पनि, बच्चा जन्मेपछि काम छोड्न पनि नचाहने र बच्चा छोड्न पनि नमिल्ने अवस्थामा हरेक कार्यालयमा ‘चाइल्ड केयर डिपार्टमेन्ट’ हुँदो हो त! यदि बच्चा या करियरमा एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था नहुदो हो त! कसैले के गर्छौ भनेर सोध्दा डिग्री पासको प्रमाणपत्र दराजमा थन्काएर म कि काम गर्दिन गृहिणी हुँ भन्नुपर्ने थिएन सायद।
खुसी हुनुपर्ने थियो तर भइनँ। न हर्षको आँशु नै आयो न त फिल्ममा जस्तै धुमताना धुमतानाको धुन नै गुञ्जियो। मात्र आँखा वरिपरि पेण्डुलमझैं प्रोफेसन- हाउसवाइफको ट्याग झुण्डिरह्यो ।